Amacandelo achanekileyo, amacandelo e-Screws, amacandelo e-Bolts-QY Precision
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi: vicky@qyprecision.com
Inkonzo yoMatshini ye-CNC
Inkonzo yokuguqula i-CNC
Die Casting Inkqubo
Isicelo soShishino lwezoNyango
Amacandelo oShishino lweemoto
Isicelo se-Electronics Industries
Iirobhothi kunye neeRobhothi eziSmart
Iindawo zokutywina zentsimbi zisetyenziswa kakhulu kushishino lweemoto.
IIRObhothi KUNYE NEERObhothi ezilumkileyo
I-QY Precision inamava atyebileyo ekuqhutyweni kweeNdawo ze-CNC zolu shishino.
UMvelisi oyiNgcali yeeNdawo zeCNC ezichanekileyo ngokwemfuno.
Iindawo ze-CNC zezixhobo zoNyango zifuna ukuchaneka okuphezulu kakhulu.
IIMPAWU ZESAMPELA BONISA
Amacandelo Metal Auto
CNC Machining Amacandelo
Amacandelo okugaya i-CNC
I-CNC yokuguqula iinxalenye
I-QY Precision ikwi-Shenzhen China, kufutshane neHongKong. Yifektri yenkonzo yomatshini ye-CNC. Ukubonelela ngeendawo zomatshini wokwenza izinto ezikumgangatho ophezulu, uzuza udumo oluphezulu kwimakethi yasekhaya naphesheya kolwandle, yaseka intsebenziswano emangalisayo neyexesha elide kunye namashishini amaninzi asuka kumashishini ahlukeneyo. Zonke iinxalenye zenziwa eTshayina kwaye zithunyelwa ngaphandle ikakhulu eJapan/Canada/US kunye neemarike zaseYurophu. I-QY Precision igxile ekuyilweni nasekuveliseni iindawo ezichanekileyo zentsimbi kunye namacandelo. Gxininisa kushishino kunye nesenzo kwimfuno, ukuba liqabane lakho elithembekileyo ngumsebenzi wethu.
Igcisa elinamava ukwenza inkqubo, kunye nenjineli yobuchwephesha ukukubonelela ngesisombululo sesicelo sakho esitsha.
Abanamava kwiSebe lezoRhwebo lwaphesheya. Unxibelelwano olukhawulezayo, ulwazi olugqwesileyo lwemizi-mveliso, Inkonzo emangalisayo emva kokuthengisa njl.njl.
Siye saseka intsebenziswano ecwangcisiweyo kunye nababoneleli bezinto ezikrwada, ngoko ke siqinisekile ukuba sikuncede ukunciphisa iindleko.
Qhubeka usenza umgudu wokwenza ngcono. Ukuba liqabane lakho, hayi umboneleli kuphela.
Ulwazi olusisiseko lonyango lobushushu bentsimbi
Ukuchaneka kwe-QY kunokugqiba yonke iNkqubo yeNkqubo ye-CNC, kuquka unyango lobushushu. Unyango lobushushu besinyithi yinkqubo apho i-workpiece yentsimbi ifudunyezwa kwiqondo lobushushu elifanelekileyo kwindawo ethile, kwaye emva kokuba igcinwe kobu bushushu kangangexesha elithile, ipholiswe kwi-di...
Malunga noMld Precision Work Technology yeZinc Alloy Die Casting
Inkqubo yokwenziwa kwemveliso: Die Casting. Ukugcina iindleko ezininzi zemveliso enkulu, umgangatho ophezulu kunye nozinzile. Ukuchaneka kwe-QY kunamava kuzo zonke iintlobo zemveliso, wamkelekile ukuthumela umbuzo. Njengesixhobo esibalulekileyo senkqubo, ukungunda kuthatha indawo ebalulekileyo kumashishini anjenge-co...
Umgangatho we-die casting mold ubaluleke kakhulu
Umgangatho we-die-casting mold iquka le miba ilandelayo: (1) Umgangatho we-aluminium alloy die-casting parts: ukuzinza kwe-dimensional kunye nokuhambelana kwe-aluminium alloy die-casting parts, ukuguda komphezulu weendawo zokuphosa, ukusetyenziswa. izinga le-aluminium alloy, njl.; (2) ...
IShishini lethu eliPhambili: Inkonzo yoMatshini ye-CNC, kuquka i-CNC Turning Parts,
I-CNC Milling Parts, CNC Drilling / Grinding / Stamping Parts etc.
Isakhiwo se-6, iPaki yoShishino lweYingtai, iDalang, iLonghua, iShenzhen, eChina
Ishishini elingcono leTouch
Umntu woqhagamshelwano eVicky Wang.